Ahoana ny fisafidianana ny milina fanapahana sticker
Miaraka amin'ny fampivelarana ny indostrian'ny dokam-barotra, maro ny filana fanontana namboarina manokana no nipoitra teny an-tsena, ary nipoitra ihany koa ny serivisy fanamboarana vondrona kely an-tserasera sy an-tserasera. Indrindra ho an'ny marika sy ny sticker, ny andiana kely manokana ...
Ny tombony azo amin'ny milina manapaka antsy amin'ny indostrian'ny akanjo
Amin'izao fotoana izao, zato taona mahery taorian'ny Revolisiona Indostrialy, ny tsenan'ny akanjo dia tsy matotra fotsiny, fa lasa tototry koa. Mandritra izany fotoana izany, miaraka amin'ny fanatsarana hatrany ny fari-piainana, lasa marika isan'andro ny marika lehibe, tsy afaka mamaly ny filan'ny olona manenjika f ...
Vanim-potoana fakana Bayberry indray
"Wang Mei" Mena somary mena eo amoron'ny tendrombohitra, Yangmei dia amin'ny Mey. Te-haka an'io voankazo io aho ary manandrana, mankahala ny tsy eto amin'ity tendrombohitra ity aho. Rehefa avy namaky ity tononkalo ity aho dia nahatsapa fangoraham-po fa tsy teo amin'ity tendrombohitra ity, koa dia nanangana t ...